Nbanye Site Otu
HỤRỤ NKWUO NKE Ọhụụ
Nabata na Association International Writing Centers Association!
Writtù Na-ede Akwụkwọ Ọgụgụ Mba Nile, a National Council of Teachers nke Bekee Mgbakwunye, hiwere na 1983. IWCA na-akwalite mmepe nke ndị isi nchịkwa ederede, ndị nkuzi, na ndị ọrụ site na ịkwado ha. ihe, akwụkwọ, na ọrụ ọkachamara ndị ọzọ; site n'ịgba ume agụmakwụkwọ metụtara na ide metụtara ngalaba metụtara; na site n'inye nzuko mba di iche-iche maka nsogbu ederede.
Y’oburu n’aru oru n’ide ederede ma obu ebe a na ede akwukwo ide akwukwo, anyi n’enwe olile anya na I ga esonye IWCA otu na- Ọnụ ego dị ọnụ ala. Ndị otu tozuru oke itinye akwụkwọ maka anyị nyere, sonye na onye ndụmọdụ anyị dabara, mee nhoputa maka nke anyị enọ, denye aha na ihe omume anyị, jee ozi na bọọdụ IWCA, ma biputere IWCA ọrụ osisi.
IWCA na-eduzi ya Kọmitii IWCA ma nwere iri na asaa Mgbakwunye otu. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ide agụmakwụkwọ na ọrụ, hụ na ị gara nke anyị Ihe onwunwe page.